हाम्रो अस्तित्व – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ जेष्ठ ११, आईतवार ०४:५२ गते
हाम्रा सफलताहरु एउटै छैनन् । प्राप्तिहरु पनि एउटै छैनन् । हाम्रा उपलब्धि र प्राप्तिहरु एउटै हुन नसक्नुमा हाम्रा रूचि र काम गर्ने तरिकामा अनेकता हुनु हो । सफलता जुन रुपमा पनि उपलब्ध हुन सक्दोरहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ । भक्ति पनि त्यस्तै हो । कृष्ण हाम्रा उपलब्धि र प्राप्ति हुनुहुन्छ । हामीले जुन तहको भक्ति गर्दछौँ, त्यही तहको मुक्ति प्राप्त गर्दछौँ । अर्थात्, हाम्रो भक्तिको अवस्थाअनुसार कृष्ण हाम्रा लागि उपलब्ध भइदिनुहुन्छ ।
मानिसको एउटा नराम्रो प्रवृत्ति के छ भने ऊ आपूmसँगको उपलब्धिमा सन्तुष्ट हुन सक्दैन । आपूm जन्मिएको घर, समाज, देश र दर्शनभन्दा अन्यत्रकै देश, दर्शन र परिवारप्रति ऊ आकर्षित हुन मन पराउँदछ । तर, मानिसको यो असन्तुष्टिले उसलाई तनावभन्दा अर्को केही दिएको छैन आजसम्म । घर छोडेर बाहिरिएकाहरुले घरमा पाएको जस्तो आनन्द र स्वतन्त्रता कतै पाएका छैनन् । पाउन पनि सक्दैनन्, किनकि प्रकृतिले मान्छेको संस्कार र उसको रूचिअनुसार नै व्यक्तिलाई घर दिएको हुन्छ, गाउँ दिएको हुन्छ, ठाउँ दिएको हुन्छ र नाउँ दिएको हुन्छ ।
हाम्रो कर्तव्य घर छोडेर कतै भौँतारिनुभन्दा घरलाई नै सुन्दर बनाउनेतिर लाग्नु हो । हाम्रो कर्तव्य भनेकै शृङ्गार हो । दिनदिनै हामीले शरीर सिँगार्दछौँ । दिनदिनै हामीले घर सिँगार्दछौँ, किनकि सिँगार्नु, सुन्दर बनाउनु नै हामी मानिसको धर्म हो । त्यसैले, प्रकृतिले पनि आपूmलाई सिँगार्न जताततै मानिस, जीवजन्तु र पशुप्राणीको व्यवस्था गरेको छ । बगर सिँगार्न ढुङ्गा, माटो र बालुवाको व्यवस्था गरेको छ । जङ्गल सिँगार्न बोटबिरूवा र जीवजनावरको व्यवस्था गरेको छ । समाज सिँगार्न मान्छे बनाएको छ । आकाश सिँगार्न तारा र नक्षत्रहरु बनाएको छ । जे होस्, प्रकृतिको चाहना भनेकै शृङ्गार हो ।
हाम्रो छुट्टै चाहना केही पनि छैन । मान्छेको मात्र होइन, धर्तीका जड वा चेतन कुनै पनि विषयको छुट्टै चाहना केही पनि छैन । हामीले प्रकृतिकै चाहना बोलिरहेका हुन्छौँ । यसो भएका हुनाले पनि जहाँको प्रकृति जस्तो छ, हामीले त्यस्तै बोल्नुपर्दछ । नेपालको प्रकृतिमा जापानको प्रकृति बोलेर हुँदैन । अमेरिकाको प्रकृति बोल्न अमेरिकाकै भाषा चाहिन्छ । युरोपलाई सिँगार्ने जिम्मा प्रकृतिले सेतो छाला भएका मान्छे जन्माएर उनीहरुलाई नै प्रदान गरेको छ । अमेरिका सिँगार्न नेपाल छोडेर हामी अमेरिकै जानुपर्दछ भन्ने होइन । यदि त्यसो ग¥यौँ भने हामीले प्रकृतिको व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरेका हुनेछौँ ।
अर्काको काम गरेर मान्छे कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैन । अर्काको भाषा बोलेर हामीले काम चलाउने मात्र हो, आपूmलाई पोख्न त मातृभाषा नै चाहिन्छ । जुन भाषामा हामीले हिँड्न सिक्यौँ, जुन भाषामा हामीले खान सिक्यौँ र जुन भाषामा हामीले गाउन सिक्यौँ, त्यही भाषा नै हाम्रो जीवनको भाषा हो । हाम्रो शरीरको रगतमा त्यही भाषाको प्रभाव परेको हुन्छ ।
प्रलोभनमा परेर आफ्नो गाउँ बेच्नुहुँदैन । प्रलोभनमा परेर आफ्नो नाउँ बेच्नुहुँदैन । हाम्रा भाषा, धर्म, संस्कृति भनेका हाम्रा पहिचान हुन् । पहिचानबिना हामी जीवित रहन पनि सक्दैनौँ । जहाँ गए पनि घरमा नफर्की सुखै छैन । केही समय भ्रमण गर्न सकिन्छ, विभिन्न गाउँहरुमा, विभिन्न धर्महरुमा र विभिन्न कर्महरुमा तर अन्ततः विश्राम गर्ने आफ्नै घरमा हो, आफ्नै गाउँमा हो । गोठबाट छुटेको वा छुटाइएको गाई दिनभर चर्न निस्कन्छ बाहिर । तर जब साँझ पर्छ, अनि फर्कन्छ सम्झिएर आफ्नै गोठ र निदाउँछ गहिरो निद्रा दिल खोलेर ।
कालीगण्डकी नदी अत्यन्त राम्रो छ । त्यहाँको पानी सबैको जिन्दगानी हो । त्यही कालीगण्डकी किनारमा भेटिन्छन् भगवान्हरु शालिग्राम बनेर । विश्वको पवित्र तीर्थ त्यही नदीको किनारमा पर्दछ । धेरै समयअघिको कुरा हो । त्यही काली नदीको पवित्र पानीमा पौडने एउटा माछोलाई बाहिरको जीवन देखेर लोभ लागेछ । वर्षौँदेखि ऊ त्यही नदीमा बाँच्दै आएको थियो । सधैँ एउटै ढुङ्गाको छेउ, उस्तै चिसो पानी । त्यही नदीमा बस्दाबस्दा वाक्क लागेको थियो उसलाई । एक दिन पानीमा पौडँदापौडँदै उसले बाहिर पानीको तीव्र प्यासले सताइएको ब्वाँसो देख्यो । त्यो ब्वाँसो पानी तिर्खाले आत्तिएर निकै टाढादेखि काली नदीको किनारमा पानी खान आएको थियो ।
दौडिएर आएको त्यो ब्वाँसोले आउँदाआउँदै नदीमा मुख डोब्यो र धीत मर्ने गरी पानी पियो । माछाले यो दृश्य देखिरहेको थियो । ब्वाँसोले पानी पिइसकेपछि उसले ब्साँसोसँग सोध्यो, ‘बन्धु, तिमीलाई पानी पिउँदा यति मजा किन आउँछ ? खै, मैले त यो पानीमा कुनै स्वाद पाउँदिनँ त । बरू, पानीबाहिरको दुनियाँ देखेर मलाई लोभ लागेर आउँछ । के गर्ने, चाहेर हुँदोरहेनछ ।’
पानी पिएर तृप्त ब्वाँसोले माछाका कुरा सुनेपछि भन्यो, ‘किन नहुनुु । तिमीलाई बाहिर निस्कन मन लागेको छ भने म सहयोग गर्न तयार छँदै छु नि । आउँछौँ ? विचार गर न त बाहिरको दुनियाँ कस्तो रहेछ ।’ ब्वाँसोका कुरा सुनेर माछो मख्ख प¥यो । उसकै आग्रहमा ब्वाँसोले त्यो माछोलाई समातेर बालुवाको किनारमा छोडिदियो । जसै माछो बालुवामा खसेको थियो, त्यसपछि नै उसको बेहाल हुन थाल्यो । बाहिरको दुनियाँ देखेर लोभिएको माछोले दुई–चार सेकेन्डमै जीवन–मरणको सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । जेठको समय, तातेको बालुवामाथि चिसो पानीमा पौडँदै गरेको माछोको यो दुर्गति ! माछोलाई हुनसम्म पीडा भयो । माछोको पीडा देखेर ब्वाँसोको हृदय पनि पग्लियो ।
हामीलाई पनि पानी जिन्दगानी हो भन्ने कुरा त्यसको आवश्यकतापछि मात्र थाहा हुन्छ । थाहा छैन, हामीमध्ये कति आपूm हुर्किएको कालीगण्डकीको शीतल पानी छोडेर बालुवाको तातो खान बाहिरिएका छौँ । बाहिरको तातोले भतभती पोलेपछि बल्ल पानी सम्झनेछौँ र फर्कने छौँ त्यही गण्डकीको किनार माछोजस्तै भएर । घर नआई सुखै छैन, किनकि घर नै हाम्रो अस्तित्व हो, सम्मान हो र सन्तुष्टि हो ।
सधैँ एकै ठाउँमा बस्दाबस्दा हामीलाई हाम्रो ठाउँ नरमाइलो लाग्न सक्छ । त्यसैले, हामी बाहिर निस्कन्छौँ रमाइलोको खोजीमा । जब हामी अपमानित हुन्छौँ, तिरस्कृत हुन्छौँ र फर्कन्छौँ आफ्नै ठाउँमा, त्यसपछि बल्ल हामीलाई हाम्रो ठाउँ रमाइलो लाग्न थाल्दछ । आनन्द बाहिर खोज्ने कुरै होइन । हामी जहाँ छौँ, त्यहीँ आनन्द छ । प्रकृतिले हामीलाई आनन्द भएकै ठाउँमा जन्माएको हुन्छ सुरूमै । हामीलाई विश्वास लाग्दैन र निस्कन्छौँ बाहिर ।
प्रकृतिबाट पनि सिकौँ न । संसारमा एउटै नदीले चल्ने भएका भए किन हुन्थे संसारभर नदीहरु ? किन चाहिन्थे हिमाल र पहाडहरु ? ठाउँठाउँमा नदीहरु छन्, ठाउँठाउँमा पहाडहरु छन् । हाम्रा धर्म र संस्कृति पनि यस्तै हुन् । मानिसका स्वभाव र रूचिअनुसार धर्म र संस्कृतिहरु विकसित भएका छन् । हामीले त्यस्तो धर्म मान्नुपर्दछ, जुन धर्ममा हाम्रा रूचि र स्वभावहरु समेटिएका छन् । हाम्रो अस्तित्वलाई सम्बोधन गर्ने धर्म त्यही हो जहाँ हामी जन्मेका छौँ, सिकेका छौँ । हामी बिकेको धर्मले हामीलाई प्रसन्न राख्न कहिल्यै सक्दैन ।
महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लाको गौशाला–सम्सी सडकखण्डमा आज बिहान टिपरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।...